Okunye ukunethezeka engikuthokozelayo empilweni yimoto enhle. Angiyi emaholidini abizayo, ngihlala endaweni enekhola elihlaza okwesibhakabhaka, futhi anginazo izinto zokuzilibazisa ezibizayo… ngakho-ke imoto yami iyisidlele sami. Ngishayela ithani lamamayela njalo ngonyaka futhi ngijabulela ukushayela noma yikuphi lapho ngiya khona kungakapheli izinsuku ezimbalwa ngishayela.
Imoto yami inezikrini ezi-3 ze-HD ezakhelwe ngaphakathi - isibuko esisodwa sokuthinta kukhonsoli nesinye ngemuva kwesihlalo ngasinye sangaphambili. Eminyakeni emi-3 eyedlule, ngikholwa ukuthi ngisebenzise eyodwa kuphela yezikrini esihlalweni sangemuva kanye… lapho indodakazi yami yayihlala esihlalweni esingemuva ohambweni. Imoto ine-DVD player, i-audio / video yokuxhuma esihlalweni esingemuva, umsakazo wesathelayithi ne-OnStar. Kukhona ipulatifomu yamamephu eyakhelwe ngaphakathi kwekhonsoli.
Esihlalweni sami sangaphambili kulolo hambo kukhona i-iPad yami ne-iPhone yami eneshaja ezidingekayo nokuxhuma kwe-USB ohlelweni lomsindo wemoto yami. Esihlalweni esingemuva ngine-laptop yami. I-Bluetooth ixhuma ifoni yami ohlelweni.
Ngokushesha nje lapho icala liqediwe umsakazo wesathelayithi, Ngiyayiyeka. Umsakazo we-iTunes nomculo ku-iPhone yami uhlinzeka ngemfanelo ecebe kakhulu ngoxhumano lwe-USB ngohlelo lweBose oluzungeze umsindo emotweni.
The ipulatifomu yemephu kudinga ukuthuthukiswa nge-DVD unyaka nonyaka okubiza ngaphezulu kwe- $ 100 ukugcina amamephu esesikhathini. Angizisebenzisi ngoba ngisebenzisa iGoogle Maps nayo yonke imininingwane yami yokuxhumana, ukusesha nge-inthanethi, nekhalenda lami lihlanganiswe ngokuphelele.
Ifike nemoto inombolo yalo yocingo engingakaze ngiyisebenzise… yingakho ngine-smartphone futhi ngisebenzisa i-Bluetooth connecivity (isebenza kahle).
Imoto ine- i-hard drive yangaphakathi engu-40Gb ukuthi ngikwazi ukudlulisela umculo nge-USB, CD, noma i-DVD… kodwa hhayi nge-smartphone yami. Ngakho-ke nginama-CD ambalwa angahleliwe alayishiwe engingakaze ngilalele.
My Ukubhaliswa kwe-OnStar iyaphela kungekudala futhi ngicabanga ngokujulile ngokungabhaliseli insizakalo eqhubekayo. Angisebenzisi nje… nganoma yini.
Kusukela i-iOS ivuselelwe, ngiye ngaphuma futhi ngasebenza ngezingcingo zami ezingaziwa ngemoto. Imoto ayinayo ukuthuthukiswa, A isitolo sohlelo lokusebenza, futhi ayihlanganisi ngokukhululekile nempilo yami… kepha ifoni yami iyakwenza.
Manje i-GM engeza i-wifi ezimotweni zabo njengenketho. I kakade ine-wifi… ngokusebenzisa izindawo ezidonsela ku-iPhone yami naku-iPad yami. Isimemezelo se-wifi yemoto singibeke emaphethelweni. Ngaphandle kukasihlalo weGM ungumfana weTelecom, angikwazi ukuthola ukuthi kungani behamba ngalo mgwaqo.
Angiyisi imoto yami yonke indawo, Ngithatha ifoni yami yonke indawo.
Ukuthengiswa kwe-iPad nokuthengiswa kwethebhulethi kuthengisa yonke ideskithophu laphaya. Ngifunde ezinye izindaba zokuthi i-Apple isebenza ukuletha isikhombimsebenzisi se-iOS ezimotweni eminyakeni embalwa ezayo. Akungabazeki ukuthi i-Android ingafika lapho ngaphambili. Engingakuqondi ukuthi kungani imboni yezimoto izama ngandlela thile ukusebenza ngokufana lapho bonke ubuchwepheshe bukhona vele entendeni yesandla sami.
Ucingo lwami aluyena isesekeli semoto yami.
Ngifuna ideshibhodi engikwazi ukuyilayisha ifoni yami kuyo eyenza i-console ikhombise izinhlelo ezijwayelekile kusikrini esikhudlwana sokuthinta. Ngifuna ikhibhodi ikhutshazwe ngaphandle kokuthi imoto ime. Akufanele ngisho ngikwazi ukususa ifoni ngaphandle kokuthi ngisepaki. Susa izikrini zangemuva bese ufaka kubakaki bendawo yonke bamaphilisi. Vumela abagibeli bami baxhume ifoni noma ithebhulethi yabo, balalele umculo wabo, noma baxhume ngohlelo lokusebenza emotweni yami ukunweba isikrini sami (esifana ne-AirPlay ye-AppleTV). Ake ngidlale umculo womgibeli wami noma umculo wami.
Imoto yami iyisesekeli sefoni yami.
Ngifuna ukulawula, ukukhuphula izinga, ukuthenga izinhlelo zokusebenza, ukulalela umculo, ukufinyelela amabalazwe, noma ukwabelana ngesikrini sami kumadivayisi wami… Hhayi ipulatifomu yemoto yami. Angifuni ukukhokhela izinhlelo ezintsha zedatha, izinhlelo ezintsha zefoni, izinhlelo ezintsha zomculo, idatha yemephu entsha… lapho sengivele ngikukhokhela lokho kuma-smartphone nakumathebulethi ami.
Ukuphela kwento engingangena kuyo i-OnStar noma olunye uxhumano lwedatha yesathelayithi engizoyikhokhela njengesipele esimweni lapho ngiphuma ebangeni leseli lomuntu engiphethe. Ngokwengeziwe, ibhethri eligodliwe lokufaka idivayisi yami uma imoto isengozini namandla engatholakali kungaba yinto efanele ukukhokhelwa.
Abakhiqizi bezimoto akufanele basebenze ezinhlelweni ezisebenzayo nasekuxhumaneni kwe-wifi, kufanele ngabe basebenzela ukuletha ulwazi lwemoto kuzinhlelo zokusebenza efonini yami… bese kuba uhlelo oluxhuma imoto kufoni yami.
Qaphela: Isithombe sivela Cadillac futhi uhlelo lwabo lweCUE.
Tags: imboni yezimotocadillaci-cadillac queuhlelo lokusebenza lwemotoi-wmUkumakethwa Kwamaselula NethebulethiIzinhlelo zokusebenza zeselulai-bluetooth yeselulai-hotspot yeselulaisistimu yokusebenza yeselulai-wifi
I-Oct 24, i-2014 ku-1: i-19 PM
Njengoba kwenzeka njalo, ngivumelana nawe 100% kule ndatshana. Ukubuyekezwa okukhazimulayo ngokuphelele nokuveza lokho imboni yezimoto okufanele icabange ngakho ngempela.
I-Oct 25, i-2014 ku-1: i-40 PM